kowinmyooo: WebcamMax 7.8.4.2 Multilingual With Patch and keygan | 25 Mb
WebcamMax 7.8.4.2 Multilingual With Patch and keygan | 25 Mb
ရုပ်ပုံတွေကို အကြည်လင်စုံး ဖမ်းယူပေးမဲ့ WebcamMax လေးပါ. မိမိ Laptop / Notebook မှာပါတဲ့
Webcam ကို စိတ်တိုင်းမကျဖြစ်နေ တဲ့မိတ်ဆွေ များအတွက် အဆင်ပြေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်ဗျာ.
WebcamMax ကတော့အားလုံးသိပြီးသားပါ။Final Version လေးကို Full ဖြစ်အောင် Keygen + Patch နဲ့တွဲပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။video
effects ပေါင်း1,000 ကျော်ပါဝင်ပါတယ်။အင်စတောလုပ်နည်းကို ဒေါင်းလော့စ်ဖိုင်ထဲမှာသေချာဖတ်ပါ။
- For all webcam programs, such as ICQ, AIM, MSN, Camfrog, Skype, Paltalk, Yahoo Messenger.
Solidfiles Sharebeast zippyshare
Posted by Ko Myo at 9:15 AM